Rooble oo war ka soo saaray jadwalka cusub ee uu soo saaray guddiga doorashada | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Rooble oo war ka soo saaray jadwalka cusub ee uu soo saaray...
Rooble oo war ka soo saaray jadwalka cusub ee uu soo saaray guddiga doorashada
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo saaray qoraal uu ku soo dhaweynayo jadwalka hannaanka doorashooyinka labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Jadwalkaan waxaa xalay soo saaray guddiga doorashooyinka heer federaal ee FEIT.
“Waxaan soo dhaweynayaa oo bogaadinayaa jadwalka ay shaaciyeen guddiga maamulka doorashooyinka ee heer federaal, kaas oo si faahfaahsan u qeexaya xilliyada iyo qaabka ay u dhaceyso doorashada Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya,” ayuu Ra’iisul Wasaare Rooble ku yiri qoraalkan uu soo saaray.
Ra’iisul Wasaaraha oo dowlad-goboleedyada dalka uga mahadceliyay dadaalkooda iyo dabacsanaanta ay muujiyeen, ayaa ku boorriyay in ay ku dhaqsadaan hirgelinta qabsoomidda doorashada dalka.
Qoraalka Rooble ayaa intaas ku sii daray, “Shacabka Soomaaliyeed waxa ay naga sugayaan doorasho nabdoon, daahfuran oo ka fog eex iyo qof jecleysi, kuna dhacda xilligii lagu heshiiyay, sidaas darteed waa in aan iska wada xilsaarnaa hirgelinta howshaas muhiimka ah, si aan dib u dhac lahayn.”
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa mar kale shacabka Soomaaliyeed uga mahad celiyay dulqaadka iyo sidii ay ugu garab istaageen dadaalladii uu hormuudka ka ahaa ee horseeday heshiiska doorashooyinka dalka oo Muqdisho ay ku gaareen isaga iyo madaxda dowlad goboleedyada.
Ugu dambeyntii Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa beesha caalamka uga mahadceliyay kaalintooda nabadeynta iyo dowlad dhiska Soomaaliya, isagoo ugu baaqay in ay taageeraan howsha hirgelinta doorashada ee haatan socota.
Previous articleLiverpool Oo Dagsatay Qorshe Ay Ku Helayso Saxiixa Saúl Ñíguez – banaadirsom
Next articleRW Rooble oo ka hadlay talaabada ay qaadeen Guddiga doorashooyinka, baaq culusna u diray maamul Goboleedyada